‘निलाे काेटकाे यात्रा’: पुस्तक अंश – KarnaliPost Daily
९ असार २०७८, बुधबार १६:४५ June 24, 2021 by Karnali Post Daily
जुम्ला । बाबा अङ्ग्रेजी शिक्षक बनाउन चाहन्थे तर म निजामती बने । प्राचीन समयमा ऐतिहासिक तथा निकै शक्तिसाली रहेको सिन्जा राज्यको मध्य सिजामा पर्ने साबिक नराकाेट गाउँ बिकास समिती वडा न. ७ माथी लेखमा पर्ने दुर्गम बस्तीमा रहेको तत्कालीन प्राथमिक बिध्यालयमा मेरो बाबाको साथमा मेरो ५ बर्षको प्राथमिकशिक्षा ४ बर्षमा पुरा गरे ।
निम्न माध्यमिक शिक्षाको अध्यन गर्न मेरो सामु दुई विकल्प थिए । जसमा मैले नजिकको होइन टाढाको विकल्प रोजे । जहाँ मेरो घर बाट छिटो हिंड्दा दैनिक हिडेर करिब २ घन्टा मा पुगिने कैलाश निमाबी फुङ्र पुगे ।
जुन यात्रामा मेरो मावली गाउका मेरा मामाहरु रतन शाही,अख शाही पदम शाही,दिदी माया देबि शाही दाजु एन ब शाही लगायतले साथ दिनु भएको थियो । र साथमा गुल्मी घर भएका गुरु राम प्रशाद शर्माले हाम्रो घर देखि बिध्यालय र बिध्यालय बाट घर सम्मको अभिभाबकिय भुमिका निभाउनु भएको थियो ।
मेरो बाबा पनि प्रधानाध्यापक हुनु भएकोले फुङ्र बिध्यालयका सबै गुरुहरुले मलाई माया गर्नु हुन्थ्यो । बिष्णु लाल सरको शालिन्ता,जगत सरको ईतिहास पढाउने रोचक शैली,रामप्रशाद सरको भलिबल खेलाउने सीप,अर्जुन र नर बहादुर सरको नियमितता,अनि कृष्ण सर र भिम सरको बिद्द्ता र प्रधानाध्यापक लोक बहादुर भण्डारीको कठाेर प्रशाशनले मेरो अध्यन लाई मजबुद बनाउदै थियो ।
प्रथम हुन नसके पनि दोश्रो हुन भने सफल भए । जुन स्कुलले मेरो पढाईको आधार बनाई दियो । अब मैले माध्यमिक तहको शिक्षा लिन भैरब माबी नराकाेट मेरो एक मात्र विकल्प थियो । कक्षा ९ मा भर्ना भए त्यहाँ पनि सबै बाबाको परिचित साथी शिक्षक भएकोले मलाई खासै गारो भएन । अध्यन चल्दै थियो । एक दिन एक्कासि कक्षाको team leader चयन गर्ने कुरा चल्यो ।
कक्षामा हामी १०० जना भन्दा बढी दैनिक उपस्थित हुने गर्थेयौ , जसमा छात्रा जम्मा ४ जना थिए । सबै साथीहरूको बिछ बाट एउटा समुहले मलाई उम्मेदवार बनायो भने अर्को समूहले चलाख साथी अनि सबैको परिचित र कक्षा १ बाट सोही स्कुलमा अध्यन गर्ने जङ राज गिरि लाई उम्मेदवार बनायो । बास्तमा मेरो जित एकदम कठिन थियो ।
बिज्ञान बिषय अध्यापन गराउने गुरुले गाग्रोमा गोप्पे मतदान गर्ने गरि मतदान गरि सकियो र लगतै मतगणना सुरु भयो । बराबर मत हुँदै अन्तिम एक मत बाकी हुदा हामी बराबर मत प्राप्त गरेका थियौ , जुन मत जस्ले पाउछ उसको बिजय निश्चित थियो । निकालियो र मत मेरो पक्षमा आयो र मेरो समुहले जित्यो । जिबनको पहिलो समुहगत जित थियो मेरो ।
तेहि भएर होला म कुनै राजनीति,सिद्धान्त नबुजेको मानिसलाई ने.बि.संघले सोझै महामन्त्री मा मनोनयन गरो र जानी नबुजी जयनेपाल भन्न सिकायो,तथापि राजनैतिक मेरो मुख्य बिषय नभएकोले यसमा धेरै ध्यान दिइन । म पढाइमा मध्यम स्तरको बिद्यार्थीको रुपमा थिए । १०० जनामा स्थान न आए पनि TOP TEN मा भने पर्थे । मेरो नाम TOP (टप )बाट सुरु भए पनि कहिले TOP हुन सकिन ।
मेरो बाबा बिधालयको हिउदे बिदामा दाङ जिल्लामा ईन्डियाका कुल्लुचेक,बल्लाङ केट कम्मल ल्याएर व्यापार गर्नु हुन्थ्यो , जुन हामी सिजाका जनताको प्रमुख पेशा थियो र आज पनि छ । तेहि हिउदे बिदामा मेरो बाबाले मलाई र दाईलाई दाङका स्कुलमा पनि केही सिकुन भनेर आफू सङै दाङ लिने गर्नु हुन्थ्यो ,जहाँ बाबालाइ जुम्लि मास्टर भनी चिन्दथे । हामिलाई दाङका मानिसले खुबै माया गर्थे । मलाई लाग्छ अन्त भन्दा दाङका मानिस धनका पनि र मनका पनि धनी हुन्छ्न ।
जहाँका स्कुलमा पनि मैले अध्यन गर्ने अबसर पाए । जिबनमा पहिलो पटक नेपाली फिल्म श्री स्वसथानी हेर्ने अबसर दाङमा पाएको थिए । अब मेरो कक्षा १० को पढाइ सकिदै एस एल सि को तयारिमा लागेको थिए , त्यो बर्ष भने बाबाले मलाई आफू सङ नलगी भैरब माबिका जुम्ला जिल्लाका प्रख्यात शिक्षक ऋषि राम भट्टराई सरको जिम्मा लगाउनु भयो । र उहाँकै नजिक रहेर मैले तयारी थाले । किन हो खै त्यो बर्ष एस एल सि परिक्षा बैशाख महिनामा भयो ।
सिजाका सबै माबी स्कुलहरुको परिक्षा केन्द हाम्रो स्कुल थियो । जसलाई स्थापना गर्न को लागि मेरा मामा लालु शाही लगायतले जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा अनशन समेत बस्नु भएको थियो सायद तेति बेला जिल्ला बाहिर एसएल सि परिक्षा केन्द तेहि थियो । परिक्षा सुरु भयो ।
सबै परिक्षा राम्रो सङ दिए । अन्तिम दिन शारीरिक बिषयको परिक्षा थियो । मैले ३५ मिनेट बाकी छ्दा परिक्षा सके र निरीक्षकलाई बुजाए मेरो बाबा पनि परिक्षा केन्द्रको घुमुवा निरीक्षक हुनु हुन्थ्यो । उहाँले मेरो कापी निरीक्षकबाट मागी पुर्न लेख्ने भन्दै मेरो हातमा थमाई दिनु भयो ।
मैले लेखी सकेकोले नलेख्ने निर्णय गरे। परिक्षा सकिएकोले म समयमै घर गए बाबाले त्यो दिन बेसरी गाली गर्नु भयो । अब नतिजा कुर्नुको विकल्प थिएन । ३ महिना पछि नतिजा आयो (Second division ) आज जस्तो सबै नम्बर तेति बेलै हेर्नको लागि मार्क लेजर कुर्नु पर्थ्यो । जब मार्क लेजर पाए बाबले लेख भनी फिर्ता गर्नु भएको बिषयमा पास अङक मात्र थियो जसको कारण करिब 1.67 % कम भै प्रथम श्रेणी हुन बाट रोकिय । जति बेला प्रथम श्रेणी भनेको आजको A पलस जस्तै थियो ।
अब सुरु भयो मेरो उच्च शिक्षाको तयारी । मेरो दाजु जुम्ला क्याम्पसमा कमर्स अध्यन गर्दै हुनु हुन्थ्यो । मलाई पनि दाइ सङ अध्यन गर्ने मन थियो तर बाबाले एक्कासि जुम्ला ल्याएर हेलिकप्टरबाट आफू सङै सुर्खेतको तातो घाममा पुगाउनु भयो । जुन तातो मैले कहिले अनुभव गरेको थिएन । यदि बाबाले मलाई फिर्ता गरि दिएको भए म सबै भन्दा बढी खुशी हुने थिए ।
बिबशता बाबाको आदेश अनुसार मलाई सुर्खेत क्याम्पस शिक्षामा अङ्ग्रेजी बिषय पढने गरि भर्ना गरि मेरो अध्यनको सबै चाजोमाजो मिलाई फर्किनु भयो । जति बेला मेरो नाममा bank खता खोली रु एक लाख छतिस हजार रुपैया जम्मा गरि दिनु भएको थियो ।
कक्षा ४ मा Abcd सिकेको र कक्षा ९ मा समान्या अङ्ग्रेजी वाक्य बनाउन सिकेको मलाई अङ्ग्रेजीमा बोल्न र लेख्न मुस्किल मात्र होइन , महा मुस्किल भयो । आफ्नो समस्या कसलाई बताउने,को बाट सिक्ने कुनै मेसो पाउन सकिन ।
जेनतेन रफ तरिकाले मेरो अध्यन सुरु गरे मैले । अब करिब करिब सुर्खेतमा मेरा पनि साथी बन्दै थिए । भने मेरो फुर्ती फार्ती पनि बढदै थियो । परिक्षा भयो दिए । दोश्रो बर्ष भर्ना भए । कक्षा सुरु भयो । अध्यन सुरु भयो । पहिलो बर्ष भन्दा दोश्रो बर्ष अङ्ग्रेजी बिषय बढी अध्यन गर्नु पर्ने भएकोले मैले अलि बढी समय र मेहनत गर्नु पर्ने थियो ।
परिक्षा दिएको करिब ८ महिना पछी प्रथम बर्षको नतिजा आयो म जिन्दगीमा पहिलो पटक फेल भए तर कति र कुन बिषय लाग्यो भन्ने थाहा पाउनको लागि मार्क लेजर कुर्नुको विकल्प थिएन । मार्क लेजर आयो हेरे सबै बिषय सफल भए पनि मनोबैज्ञान भन्नेमा जम्मा 17 नम्बर आएको रहेछ ।
खुशी थिए किनकी मेरो बाबाको अङ्ग्रेजी पढाउने धोको रहेको अङ्ग्रेजी बिषय लागेको थिएन बरु 78 नम्बर प्राप्त गरेको थिए । दोश्रो बर्षमा धेरै मेहनत गरे र नियमित परिक्षा उतिर्ण गरे । दोश्रो बर्षको परिक्षा दिए पछि नतिजा न आउन्जेल सम्म तेसै के बस्नु भनी मेरो मामा,दाइ ( राज बहादुर शाही) को सल्लाह बमोजिम घुम्न पनि हुने र अलिकती पैशा पनि हुने देखेर भारतमा हिङ,सिलाजित बेच्न हिडे ।
रमाइलो भो करिब करिब धेरै भारतका स्थानमा घुमे । जसमा मलाई सबै भन्दा बढी साथ दिने दाइ राज ब शाही थिए । भने मेरो मामा अभिभावकको रुपमा team leader हुनु हुन्थ्यो । त्यो समुहमा पनि आजको करिब राउटे सङ मिल्ने नियम अनुशासन पालन गर्नु पर्थ्यो । अलि धेरै दुख जस्तो भए पछि म ३५ दिन पछि नेपाल फर्के । ३५ दिनमा मेरो कमाई करिब २२ हजार आईसी थियो ।
जुन रुपैया मैले दाईलाई दिए र दाईले मलाई केही फिर्ता गरि दिनु भयो । नतिजा आयो दोश्रो बर्ष पास भए।जुम्ला फर्किय । बिहे गरे।बिहेको बारेमा पछी बिर्स्तृत व्याख्या गर्ने छु ।
अङ्ग्रेजी बिषयमा पास गरेको म बाबाको अङ्ग्रेजी शिक्षक बनाउने सपना नजिक थिए । एक दुई स्थान बाट अनुरोध आएको थियो । त्यो दुर्गम भएकोले मेरो बाबाले न पठाउने निर्णय गर्नु भो । र मलाई अङ्ग्रेजी बिषय लिएर BED अध्यन गराउन पुनः सुर्खेत पठाउनु भयो । पहिलो बर्ष अध्यन गर्दै थिए । परिक्षा के कारणले स्थगित भयो । मलाई बाबाले यति air हवाईजहाज मार्फत जुम्ला घर आउने सल्लाह दिनु भयो म आए ।
होटेल निलकन्ठमा मेरो बाबाको बस्ने भएकोले म तेहि बसे । जहाँ प्रेम बहादुर महत दाइ बस्नु हुन्थ्यो । मलाई थाहा थिएन । बन कार्यलय माताहत रहने बन कार्य सहायक (मुखिया स्तरको)पदमा मेरो पनि फारम लगाएका रहेछ्न । तत्कालीन जिएम डि स्कुलमा पहिलो पटक लोक सेबा आयोगको मैले परिक्षा दिए । प्रश्न कक्षा ९-१० का बिज्ञान,गणित,बाताबरण जस्ता बिषय बाट आएको थिए ।
मैले जाने जति सबैमा लगाए र म घर गए । घरमा केही दिन बसी म पुर्न सुर्खेत फर्के । स्थगित प्रथम बर्षको परिक्षा दिने तयारी गर्नको लागि लागि परे । कलम पेन रुलर किन्नको लागि सिस्ने पुस्तक पसलमा गएको बेला पसल मालिक उदिराम डागिले सर तपाईंको नाम लोक सेबा आयोगमा निस्केको छ भनी सुनायो जुन कुरा मैले बिर्सी सकेको थिए ।
उसले गोर्खापत्र पत्रीका निकाल्दै १० sit मा १३ जनाको नाम निस्केको र अन्तरबार्ता समय सकिएको सुनायो र अब जादा पनि निबेदन दिए ,अन्तरबार्ता दिन मिल्ने सुझायो साथिले । तेति बेला लोक सेबा आयोगको नतिजा बुधबारको गाेर्खापत्रमा आउथ्यो । म सुर्खेत बाट हवाईजहाजमा जुम्ला पुगे र अन्तरबार्ताको लागि निवेदन दिए र अन्तरबार्तामा समबेश भए र तत्काल घर सिजा फर्किय । यता उसै दिन नतिजा प्रकाशन गरि मेरो नाम ४ नम्बर मा जिल्ला बन कार्यलय जुम्लामा सिफारिस भएछ ।
यसरी अङ्ग्रेजी शिक्षक बनाउने बाबाको सपना पूरा हुन नपाउदै अन्जान्मै १९.५ बर्षको उमेरमा हरियो काेटकाे यात्रा निजामती सेबामा सुरु भयो । थाहा थिएन केहो निजामती जागिर अनि केहो तेसको मूल्य मान्यता र सस्कार भन्ने कुरा । सिफारिस लिएर जिल्ला बन कार्यलय मा हाजिर हुन गए ।
निमित्त हाकिमले मलाई हाजिर गराएनन के भएको रहेछ भने लोक सेबा माग्दा ६ sit मागेको तर सिफारिस भै आउदा एउटा अर्को sit मा अर्को मानिस सरुवा भै आई सकेको रहेछ । तर यदि हामी सङै हाजिर हुन गएको भए मलाई हाजिर हुने अन्तिम ६ नम्बर लाई मेरो जस्तो गारो हुने रहेछ तर म घर जादा यता म भन्दा पछाडी का पनि अगाडी हाजिर भै सकेकाले त्यो मारमा म परे ।
नियम अनुशार मेरो हाजिर गराउनु पर्ने भए पनि मलाई ती निमित्त ले दिनु दुख दिए । म त खान्न भन्दै सुर्खेत फर्किने भनी निर्णय गरि सकेको थिए । सिन्जाका तत्कालिन पशु कार्यलयका दाजु तिलक आचार्यले जान दिनु भएन र झगडा गरि मलाई हाजिर गराउनु भयो । हाजिर भैयो। काम केही थाहा थिएन । अब मलाई भने लोक सेबाको रस लागि सकेको थियो ।
खरिदार,सलेपा,गाबिस सचिब मा तयारी गरे र पहिलो पास गरेको ६ महिनामै मैले सलेपा र खरदारमा एकै पटक दुई स्थान बाट लोक सेबा पास गरे । जनयुद्धको चरम रुप थियो हामी बिस्तापित थियौ । बाबाको जागिर अशोक नमुना बजारमा काजमा थियो । खरदारको जागिर खादा गाबिस सचिब हुने र हामी माओवादी बिस्थापित भएकोले सो पदमा अन्तरबार्ता नदिने निर्णय भयो र लोक सेबामा ल्याप्चे गर्नु पर्ने रहेछ दिन्न भनेर । हाकिम , काम गर्ने धेरै कर्मचारीले अन्तरबार्ता दिन सुझाए ,दिनै पर्ने भनी एक दिन सोच्न मेरै हितको लागि लगाए ।
तर मैले मेरो आदर्श मेरो आमा बाबाको र मेरो श्रीमतिको सल्लाह बमोजिम अन्तरबार्तामा बस्न नसक्ने निर्णय सुनाए र ल्याप्छे सहिछाप गरि दिए भने सहलेखापालको परिक्षामा सहभागी भए र अशफल भए । तेसपछी यो खरदार तहको कुनै पनि परिक्षा नदिने निर्णय गरे र लोक सेबा पढाइ,जागिर र स्नातकको अध्यन सङसङै अगाडी बढाए र केही समयमै शिक्षा सेबाको सुब्बामा मध्यपश्चिम क्षेत्रबाट २ नम्बर मा सफल भए र मुगुमा सिफारिस भए । सङै स्नातक पनि regular पास गरे ।
बत्ती नभएको मुगुमा मैनबत्ती बालेर अध्यन गर्दै सुब्बा भएको १३ महिना मै मेरो अधिकृत पास गराउन उत्प्रेरित गर्ने दाजु जीवन भणडारिको उत्प्रेरणामा नेपाल सरकारको अधिकृत पदमा २७ sit मा ६ नम्बरमा सिफारिस भै शिक्षा,बिज्ञान तथा प्रबिधी मन्त्रालय अन्तर्गत जुम्लामा पदस्थापन भए ।
यसरी आजका दिन सम्म पनि लोक सेबा आयोग को आगामी पदको लागि अविरल रुपमा लागि रहेको छु । र बाबाको अङ्ग्रेजी शिक्षक बनाउने सपना पूरा गर्न नपाएकोमा बाबा सङ माफी चाहन्छु । तर अहिले मेरो बाबा अङ्ग्रेजी शिक्षक बनाउन नपाएकोमा दुखी हुनु हुन्न । म बाट खुशी हुनु हुन्छ ।
(माथि प्रकाशित कथा,सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लाका कार्यालय प्रमुख टाेप बहादुर बुढाले लेखिरहनु भएकाे किताब “निलाे काेटकाे यात्रा” काे पुस्तक अंश हाे ।)
‘मेरो रातो’पुस्तक,समाज बदल्ने अस्त्र होःछात्रा पराजुली राष्ट्रसेबक बुढाकाे नवनियुक्त प्रधानमन्त्री देउवालाई सुझाव ! माओवादी जनयुद्ध र मेरो परिबारको कहालीलाग्दो बेदना ! आमाले जातीय जन्जिर तोडेको त्यो दिन कृषि कर्म प्रति विश्वास जगाउँदै कोरोना कहर